Madaxweyne Deni oo Wax ka Qabanaya Saddex Arrimood Oo Muhiim u ah Gobolka Mudug
26th May 2019 by Barre Leave a Comment
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo safar shaqo oo 8 maalmood qaatay ku tegay gobolka Mudug ee Puntland ayaa kulamo kala duwan uu la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolkaagi, wuxuu ballanqaaday inuu wax ka qabanayo saddex arrimood oo kala ah:
Madxweynuhu wuxuu isla maanta magacaabay guddi heer wasiir ah oo ka shaqayn doono dib habaynta hay’adaha gobolka Mudug.
Guddigan oo ka kooban 8 xubnood waxaa madax ka aha wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Axmed, Waxaa xubno ka ah wasiirka maaliyadda Puntland, wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska iyo xildhibaano ka tirsan gollaha wakiiladda Puntland.
Guddiga Dib u habaynta hay’adaha gobolka Mudug
ISBEDEL LAGU SAMEEYAY GARSOORKA
Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa kusoo saaray Xeer Madaxweyne Lr ,26, May, 25, 2019 bedelid ku meel gaar ah, rukhso garsoorayaasha maxkamadda derejada 1-aad ee gobolka Mudug, tan racfaanka iyo xeer ilaalinta gobolka Mudug.
Markii uu madaxweynuhu dhagaystay talo soo jeedintii guddiga sare ee garsoorka Puntland, wuxuu Maxamed Maxamuud Jamaac oo ahaa garsoore maxkamadda derejada 1-aad ee Xarfo si kumeel gaar ah loogu bedeley Guddoomiyaha Maxakamadda derejada 1-aad ee Gaalkacyo.
Sidoo kale, Wuxuu rukhseeyey garsoorayaasha maxkamadda derejada 1-aad ee gobolka Mudug, tan racfaanka iyo xeer ilaalinta gobolka Mudug.
Madaxweyne deni oo ay weheliyeen wasiiradda arrimaha gudaha, maaliyadda iyo xildhibaano ayaa wuxuu kulamo la qaatay madaxda iyo saraakiisha amniga ee Gobolka Mudug, kulamadaasi ayaa ahaa isxogwaraysi xaalada guud ee gobolka mudug. waxaana madaxweynuhu uu ballanqaaday inuu isbedel xoog leh lagu samayn doono laamaha amniga ee gobolka Mudug.
Gababagabadii, Sida horseedmedia ogaatay, Madaxweynaha Puntland ayaa magacaabaya guddoomiyaha gobolka Mudug iyo ku-xigeenkiisa ka hor inta uusan u dhoofin wadanka shiinaha oo uu casuumad ka helay.